VaTsenengamu Vanonyimwa Mukana Wekuti Vabvise Mari yeChibatiso
Gumiguru 13, 2020
Tsenengamu In Court 2
Vaimbove murongi wemusangano mubazi revechidiki mubato reZanuPF, VaGodfrey Tsenengamu, vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa, yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga muna Chikunguru.
Mutongi wedare ramajisitireti, VaNgoni Nduna, varasa chikumbiro chaVaTsenengamu chekuti vatongwe vachibva kumba vakati vaende kutirongo vozodzoka musi wa27 Gumiguru apo pachanzikwa nyaya yavo.
VaTsenengamu vakazvipira kumapurisa Chishanu chapfuura vachiti vainge vachiteverwa nevanhu vavasinganzive kuti ndivanani.
Gweta reVaTsenengamu, VaHarrision Nkomo, vati dare raona zvakakodzero kuti vatongwe vachibva kutirongo sezvo hupenyu hwavo huri panguva yakaoma.
VaTsenengamu, avo vainge vari kutsvaga nemapurisa, vakazozvipira pakamba yeHarare Central nemusi weChishanu.
Mune imwewo nyaya, sangano remagweta, reLaw Society of Zimbabwe, rinoti rave kuongorora nyaya yekuti imwe nhengo yaro, Amai Beatrice Mtetwa, avo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka pamwe nekuzvidza dare apo vaimirira Chin’ono panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga.
Pamutongo wavo muna Nyamavhuvhu wekurambidza Amai Mtetwa kuti vamirire Chin’ono, VaNduna vakati Law Society of Zimbabwe yaifanirwa kuongorora maitiro aAmai Mtetwa pamwe nekuvaranga nekuda kwemhosva yavo iyi.
Mutauriri weLaw Society of Zimbabwe, VaRichard Chidza, vaudza Studio 7 kuti vave kuongorora nyaya iyi.
Amai Mtetwa vaudzawo Studio7 kuti hongu Law Society Zimbabwe yave kuongorora nyaya yavo, uye vati vari kupikisa mutongo waVaNduna.
Asi Amai Mtetwa vabvumwa kuti National Prosecuting Authority yatoisa magwaro ayo kudare ekupikisa danho ravakatora rekupikisa mutongo waVaNduna kudare repamusoro.
Zvichakadai, mune imwewo nyaya, kanzura weMDC Alliance kuMasvingo, VaGodfrey Kurauone, vaenda kudare repamusoro vachida kuripwa negurukota rinoona nezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe; mukuru wemapurisa; Commissioner General Godwin Matanga; Prosecutor General, VaKumbirai Rwodzi; mukuru wemapusa eCID kuMasvingo pamwe Detective Constable Muwonde mushure mekusungwa musi 31 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekuratidza nevharwa migwagwa asi vakazowanikwa vasina mhosva mushure mekugara mutirongo kwemazuva anodarika makumi mana.
Gweta raVaKurauone, VaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudza Studio7 kuti VaKurauone vanoda kuripwa mariyoni maviri nemazana mana ezviuru zvemadhora nekuda kwekusungwa kwavakaitwa uko vanoti kwaive kusiri pamutemo.
Mune imwewo nyaya yaitika muHarare, nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinoti Muzvare Joana Mamombe, Muzvare Netsai Marova naMuzvare Cecilia Chimbiri, dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekuratidzira panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kweCovid-19.
Asi nyaya iyi haina kuenderera mberi nekutongwa sezvo mutongi wedare ati idzoke mudare musi 17 Mbudzi.